IZINTO EZIMBI ZEXESHA LESI-4: YINTONI ESIYICHAPHAZELAYO KWITEER YAKUTSHANJE NGENETFLIX? - IINKQUBO ZETV
Izinto eziMbi zeXesha lesi-4: Yintoni esiyiChaphazelayo kwiTeer yakutshanje ngeNetflix?
Izinto ezingaqhelekanga abalandeli, le yeyenu. Ewe, ixesha lokugqibela lezinto ezingaqhelekanga lishiye abalandeli ngenzondelelo
Izinto ezingaqhelekanga abalandeli, le yeyenu. Ewe, ixesha lokugqibela lezinto ezingaqhelekanga lishiye abalandeli ngenzondelelo ekhokelela ngokuthe ngqo ekufikeni kwexesha elizayo.
Kodwa ngaba liza kubakho ixesha lesi-4 lezinto ezingaqhelekanga? Kukho amarhe ahamba kwiMithombo yeendaba yeNtlalo malunga nokuKhutshwa kweXesha elizayo leZinto ezingezizo emva kweminyaka emi-2 yeXesha lokugqibela? Kodwa kutheni le nto amarhe ajikelezayo kumaSocial Media? Kungenxa yetrayer yakutshanje, ekhutshwe yiNetflix.
Iindaba ezinkulu zohlaziyo lwexesha lesi-4 zivela kwitrayer yakutshanje apho abantu abadumileyo babonwa beqhayisa ngeenwele zabo, apho abanye baboniswa iHopper ngombane, ngaloo ndlela begcina amathemba phezulu kubalandeli.
Ewe, Ukwazi inyani yeZinto ezingaziwayo 4, funda inqaku kude kube sekupheleni, kwaye ungalibali ukulandela umhla wokukhutshwa.
Yonke into kufuneka uyazi malunga nezinto ezingaziwayo 4
Umthombo: Yintoni kwiNetflix
Izinto ezingaqhelekanga 4 zonke zikulungele ukukhululwa. Kukho intelekelelo eninzi eyenzekayo malunga nabalingisi, abasebenzi, itiers, kunye nemifanekiso evuzayo yabalandeli, ebonisa ngokucacileyo ukubonakaliswa kwezinto zoMmangaliso Izinto ezi-4 zokuvuselela, kodwa kuhlala kuninzi oku.
Kodwa ukuqala, umntu kufuneka azi ukuba kuqhubeka ntoni kwi-Stranger kubo ukuze baqonde indawo yexesha elizayo,
Izinto zasemzini yinto eyothusayo esekwe kumdlalo weqonga ongaphaya kwendalo, ojikeleza iqela labakwishumi elivisayo abangabahlobo, ubomi babo bujika ngendlela eyahlukileyo xa beqala ukubona ubungqina boxinzelelo lwamandla angaphezu kwendalo ngaphandle kokuba balahle ukusebenzisa kwabo ukuphelisa ukuxhaphaza. iimfihlo zikarhulumente.
Izinto ezingaqhelekanga yidrama eyaziwayo esekwe kwiminyaka ye-80 yaseIndiana, neyayiqala ukuhlelwa ukuba isebenze ixesha eli-1 kuphela, kodwa inikwe ukuthandwa kakhulu, uthotho luye lwaqhuba amaxesha amabini angaphezulu, kwaye ngoku amaxesha alo amane asencwadini, ethi Kukho amarhe okuba akhululwe kunyaka olandelayo.
Isiphelo sexesha lesi-3 sishiye abalandeli bephanga. Isiqendu semizuzu engama-77 Idabi laseStarcourt ’lenze iziphelo ezininzi ezikhululekileyo, eziza kuvakala kwiziqendu zokuqala ezi-3 zexesha elizayo le-4.
Kwitrayer yakutshanje, ekhutshwe yiNetflix ngoMeyi, abalandeli baye bakubona ukusilela kovavanyo lukaGqr Benner ebantwaneni, kwaye ekugqibeleni, ukubuyela umva kwesizini ephelileyo okwenza abalandeli bazibuze ngekamva.
Umhla wokuKhutshwa kweZinto eziMbiyo zeXesha lesi-4
Ukuthembeka, akubangakho sibhengezo sisemthethweni malunga nokuvuselelwa kunye nokukhutshwa kwexesha elizayo leZinto eziMbi zenziwe ngeNetflix okanye ngemveliso.
Kodwa xa unikwe indawo yesiqendu sokugqibela seXesha elidlulileyo kunye nomsizi wamva nje okhutshwe yiNetflix, Umntu unokuqonda ukuba ukukhutshwa kwehlabathi kolunye uthotho lweentombazana ezithandwayo kuya kubuyela kwelinye ixesha elibalaseleyo kodwa hayi kulo nyaka.
Nangona sisazi ngoku ukuba ixesha lesine alinakufika de kube ngu-2022. Iteyi yoqobo iqinisekise kuphela ukuba imeko yehlabathi izakubuya kunyaka olandelayo, emva kwexesha kakhulu kunokuba bekulindelwe ngabalandeli.
Ixesha elitsha lazo zonke izinto zaseMelika kwiNetflix
Ixesha lekakegurui 3 ukukhutshwa komhla
amathambo alungileyo ixesha lesi-5
Iimuvi ezifanayo ne-interstellar
Ixesha le-aot 4 icandelo le-2 manga
amagama amnandi ukubiza intombi yakho
ikhowudi geass r3 erhuqwayo